Kukwidzwa kweAmazon Kukwidza: Zvinhu Zvokuita Mushure meAmazon Mutengesi Kumiswa
Do's & Don'ts Mushure meAmazon Mutengesi Akaundi Kumiswa
Amazon yevatengesi vepamhepo ndiyo mecca tsvene. Uye, zvinoenda zvakafanana kune vatengi zvakare. Kune akawanda akasiyana zvikamu uye zvigadzirwa izvo munhu anogona kutenga. Kunyangwe, pamwe nenhamba iri kuwedzera yevatengesi papuratifomu ichipa zvigadzirwa zvikuru, huwandu hwekumiswa kweAmazon kukwidza kwakawedzerawo.
Izvi zvakaitika nekuti mhando yezvigadzirwa papuratifomu yakadzikira uye huwandu hwevatengi vasina mufaro hwakawedzera. Kuti uve nechokwadi chekuti vatengi veAmazon vanowana zvakanakisa zvinhu online, Amazon inoedza kuve nevatengesi vemhando yepamusoro Amazon inoita izvi nekumisikidza marongero pamusoro pevatengesi papuratifomu. Uye, kana ikasatambiswa chaiko navo vanobva vamisa account yavo. Izvo zvinoitika zvinoitika uye isu tiri kambani inobatsira vanhu mune yakadai kudiwa.
Kunyangwe, kana iwe uri mutsva kune ino musoro saka ini ndinokuraira kuti iwe uverenge pasi pazasi zvimwe nezvekumiswa kweAmazon kukwidza, uye nemabatiro atinoita isu vanhu vane vatengesi maakaundi maakaunzi.
Zvinorevei Akaundi Akaundi Kumiswa kunorevei?
Nenhamba iri kukura, pange paine zviitiko zvakawandisa uye zvekumiswa kwevatengesi veAmazon. Sezvineiwo, panogona kuve nemamiriro matatu ayo mutengesi weAmazon angangopfuura nawo. Izvi ndeizvi:
Kusimudzirwa: Kana account yako ikamiswa zvinoreva kuti iwe unogona kukonzeresa Kumiswa kweAmazon. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuuya nehurongwa hwekuita.
Vakaramba: Izvi zvinoreva kuti mutengesi akagadzira kukwidzwa kweAmazon asi zvakarambwa nevakuru. Mune ino kesi, mumwe anofanirwa kuuya neakagadziridzwa chirongwa cheKushanda.
kurambidzwa: Iyi ndiyo poindi yekusadzoka. Hapana kumiswa kukwidzwa kunogona kukusevha kana yako account yakarambidzwa.
Kumiswa kweAmazon kunogona kupfupikiswa mune maviri ekutanga. Kana yako account ikamiswa kana kukwidza kwako kwaramba. Zvinongoreva kuti Amazon inoda kuti iwe uite shanduko uye nekuvandudza masevhisi ako.
Asi, kana iwe ukarambidzwa kubva papuratifomu iyo iri chaizvo nzvimbo ine rima saka hapana kudzoka. Mumwe anogona kufunga nezvekuvhura account nyowani asi izvo zvinopesana nemitemo yeAmazon. Izvi zvinoreva kuti hapana nzira chaiyo yekudzorera account yako. Kunyangwe, izvi zvinongoitika chete kune yakashata zviitiko. Saka, kana iwe usingazive mune ino chiuno saka mikana ndeyekuti iwe unogona kusasvika padanho iro. Uye izvo zvinogona kunyatso kugadziriswa uchishandisa anoshanda anoshanda ekumiswa kweAmazon.
Chikonzero Chakajairika Chikonzero chekumiswa kweAmazon
Kana tikatanga kuverenga mazwi & mamiriro eAmazon saka zvinotora nguva uye yakawanda yakawanda nyonganiso. Amazon ndiyo huru ecommerce chikuva inokumbira kutevedzera mitemo yakawanda nemirau. Ichi ndicho chikonzero nei huwandu hwekumiswa kweAmazon kukwidza pamusoro penguva yakwira. Muchokwadi, isu tanga tiri pachedu tichiona kuwanda kwehuwandu hwevanhu vachiuya kwatiri kuzomiswa kuAmazon kukwidza. Kana tikaenda nebhuku rekumaoko reAmazon ipapo panogona kuve nezvakawanda zvikonzero. Asi, zvese zvacho zvinogona kusimbiswa kuita zvitatu:
Chikonzero chakajairika iko kutyora kwemitemo Amazon inokumbira iwe utevere. Kana usati wave proactive saka mikana iwe unogona kunge uri mukutyorwa kwemitemo.
Bhizinesi rako riri kutora kudzika kwakadzika. Amazon haidi kufadza vatengesi vane varombo kutengesa. Kazhinji yenguva, pane zvikonzero zvakasimba nei izvi zviri kuitika? Uye kana uchizviziva saka ita shuwa kuti unogadzirisa.
Kutengesa chigadzirwa chisingabvumirwe pachikuva. Izvi zvinogona zvakare kuitika nezvigadzirwa zvinokanganisa IP Maitiro.
Uyewo Verenga: Amazon Mutengesi Akaunti Kumiswa Zvikonzero
Isu tinowana sei nyaya yekumiswa kweAmazon?
Pasina kumhanyisa misoro yedu pano neapo, nzira yakanakisa yekuita izvi ndeyekutarisa chiziviso chakatumirwa neAmazon. Kana yako account yakamiswa kekutanga saka ungangotadza kuzviteerera. Asi, Amazon inova nechokwadi chekunongedza chikanganiso chako uye ndipo patinoyedza kubatsira.
Kupfuura nepano chiziviso chakatumirwa neAmazon, isu tinotanga basa redu kugadzira yako mutengesi account iyo yakagadziriswa Amazon kumiswa kukwidza.
Nzira yekudzivirira sei Amazon Mutengesi Akaundi Kumiswa?
Kunyora kukwidzwa kweAmazon kukakavara zvisina basa kana munhu achigona kungogara kure nekumiswa. Isu tiri Amazon inomisa basa rekukumbira asi isu tinopawo vatengi vedu nerubatsiro rwekumiswa kudzivirira.
Kuita kuti account yako imiswe uye kuitisa kuti idzoreke zvinoita kunge zvakajairika. Asi, chii chinoitika kana iwe ukarasikirwa nebhizinesi rako kune iwo mashoma mazuva. Muchokwadi, izvi zvinogona zvakare kukanganisa kuvimbika kwako uye chinzvimbo chinogadzirwa pachirongwa. Kunze kweizvozvo chitoro chako chenguva yacho chakavharwa zvinoreva kuti hausi kuita chero mari.
Isu tinoteerera zvakanyanya kune ako zviito pachikuva uye tinokutungamira iwe kuburikidza. Isu tinoedza kuti iwe usabatwe mune chero zviito zvakaipa, zvingave uchiziva kana kusaziva. Nditendese, vatengi vazhinji vanonzwa kuti vanogona kukanganisa nekuhaya mumwe munhu sesu. Asi, zvinogara zvisingashande nenzira yatinoda kunyanya kana mutengi anga achidzokorora izvo zvakafanana zvikanganiso kakawanda. Isu tinove nechokwadi chekuti iwe hausi mukukanganisa uye chengetedza nzira kuitira kuti mutengesi account yehutano isimbiswe uye vatengi vadzivise chero kumiswa kwekumiswa kweAmazon.
Isu tinogadzira sei yakagadziriswa Plan Yekuita yeAmazon kumiswa?
Pane zvinhu zvakati wandei zvinoda kuitirwa wega. Semuenzaniso, kutarisa chiziviso chakatumirwa neAmazon pakumiswa. Kuongorora metrics mutengesi kuti uone kuti account yako yanga ichiita sei panguva ino.
Kuti tiite mikana yedu yakanaka uye tigadzire yakakodzera Chirongwa Chekuita (POA), tinoedza kunyatsoita sezvinobvira. Uye, isu zvakare tinoedza kukumbira ruregerero, iri iro kiyi iro rinogona kuve rine simba chairo.
Zvakanaka, takaita izvi akaenzana nguva dzakanaka. Isu patinonzwisisa zvese zvatakapihwa, edza kugadzira chirongwa chinoshandisa izvi zvakakosha zvinhu semisanganiswa:
Isu panzvimbo yako tinotora mutoro wekurasikirwa kupi nekupi kwakaitika. Zvingave zvepuratifomu kana vatengi kana ese ari maviri.
Edza kugadzira pikicha patinovaita kuti vanzwe kuti inotenda kuve neplatifomu senge Amazon. Uye, iwo mukana wechokwadi watisingazoda kukanganisa.
Usatsoropodza chero vamwe vatengesi zvigadzirwa kana masevhisi avo. Amazon inotora nguva yakafanira asi inomisa chero munhu ari kutyora.
Uye sekutaura kwatakaita "kukumbira ruregerero" ndiro rakakosha.
Izvi zvingaite kunge zvekubata kumeso asi vimba neni zvese ichokwadi nenzira yakanaka. Amazon yakanyatso kupa chikuva kune vazhinji vechokwadi kutengeserana. Inopa mikana yakawanda kune avo vanoshuvira kuita zvakanaka bhizinesi ravo. Kugona kutengesa zvakananga kune vamwe vako vatengi kubva chero chinhu chinhu chero munhu chaaishuvira. Uye ikozvino kana chiri chaicho pachinzvimbo chekutenda, vazhinji vevatengesi vanongoedza kuzvishandisa nekuda kwezvinangwa zvenguva pfupi.
Zvakanaka, kana tangounganidza iyo data rese kuti tivake yakanaka Amazon kumiswa kukwidza, hatikurumidze. Izvo zvakakosha kuti chero chii chiri kutumirwa kuAmazon chiri chemhando yepamusoro mhando. Izvi zvingaite senge zvinokatyamadza asi chokwadi ndechekuti kana ukapotsa kuedza kwako kwekutanga uye kudzoreredza kunogona kutora nguva yakawanda.
Zvimwe zvakakosha zvinoshandiswa zvatinoshandisa kuvaka yakakodzera Kukwidzwa kweAmazon:
Isu tinoedza chete kutaura nezve marongero uye chii kodzero yedu. Iko hakuna chikonzero chekutaura nezve mashandiro metric iwe paunomiswa. Kunyangwe iwe urikupa nhamba dzinopisa, hazvireve chero chinhu kunyanya kana kunetsekana kwakasiyana.
Isu tinove nechokwadi chekuti tsamba yatinotumirwa haina kureba muchimiro. Yakareba zvemukati zvinotora nguva kugaya uye nekudaro ipfupi uye yakapfava ndiyo nzira kwayo yekunyora yekumiswa kweAmazon kukwidza.
Panzvimbo pekushandisa yakareba ndima dzerondedzero, isu tinoedza kuronga yedu amazon kumiswa kukwidza tichishandisa mabara mapoinzi nenhamba. Izvi zvingaite senge diki dhiri asi zvinoita yako tsamba yekumhan'ara nzira yakawanda scannable kune akagadzwa Amazon nyanzvi.
Isu tinoedza kudzivirira chero ruzivo rwekuwedzera uye tinotarisa chete pane yakapihwa mutengi. Izvi hazvifambise kutarisirwa kusiri madikanwa kumwe kunhu.
Kutanga kwedu kwebasa idambudziko ravepo. Panzvimbo pekutamba chero mhosva mitambo kune chero munhu, isu tinove nechokwadi chekuti Amazon inoziva kuti isu tinonzwisisa kutadza kwedu uye tichazvigadzirisa ASAP, uye hatimbozvidzokorora zvakare.
Chimwe chirevo chikuru, chatinowanzoshandisa kunyora ndima yekusuma inotsanangura zvese mushe. Izvi zvingaite kunge zvishoma kunze kwechikamu asi zvinoshanda semashiripiti. Aya matipi anobatsira kwazvo uchiita kukwidzwa kweAmazon. Uye, kazhinji ndiwo maratidziro atinotamba mukati asi zvakakosha kuti uzive kuti chete dambudziko riripo ndiro rinozoona kuti richagadziriswa sei.
Sei isu tichikurudzira kuti vatengesi vaende kumhizha kune Kumiswa Kukwidzwa?
Zvakanaka, izvi zvinogona kurira kunge zvisinganzwisisike asi manzwiro anogona kuve chikonzero chikuru nei kudzoreredzwa kwako kungatora nguva yakareba. Tinosangana nevatengi zuva nezuva avo vanga vachishanda vakatendeka pachikuva. Asi, account yavo yakamiswa nekuti ivo vanga vasingazive kana kungoita zvisingaite mudhipatimendi iri.
Muchokwadi, isu tinogona kukuudza iwe nezve vatengi izvo zvinongodzivirira kuzivisa kweAmazon nekuti ivo vaizomira kutengesa imwe yezvigadzirwa zvavo nekuda kweongororo dzemushandisi Kunyangwe vasati vaita chero chinhu, Amazon yakamisa account yavo.
Kune vanhu vazhinji kwazvo papuratifomu avo vakapa yakawanda nguva yekuvaka bhizinesi ravo. Kuzvitora zvese munguva pfupi zvinogona kuve zvakawanda kune vazhinji. Uye, zvakakosha kuti uzvichengete iwe wakazvinyora. Uye, pamusoro pekuve yako yekutanga timu yekupindura painomiswa, tinova nechokwadi chekuti haumiswe panzvimbo yekutanga. Isu @ APlus Global Ecommerce tinotenda isu pachedu kuve vanobatana nevatengi vedu munguva dzekuda. Bhizinesi ravo riri kubudirira ndiko kubudirira kwedu.
Yedu Yekupedzisira Matipi ekudzivisa kunyora iyo Amazon Kumiswa
Ehe, isu tiri sevhisi uye tinoda kuwana bhizinesi. Asi, izvi hazvireve kuti hatifanire kuyedza kubatsira vatinonamata navo maAmazon Sellers. Tinogona kuve nemabasa akasiyana asi isu tinonzwisisa dambudziko rako. Uye nepo paine akawanda masevhisi kunze uko munhu wese anofunga nezvekupa rakaringana pfuti pakuyedza kuzviitira kukwidza pachavo. Kune zvakawanda zvezvinhu zvinogona kutaurwa asi zvinogara zvirinani kudzivirira chero kumiswa. Kuti uite kudaro pane akati wandei zvinhu izvo iwe zvaunoda kuti uchengete mupfungwa.
Dzivisa kutengesa chero rudzi rwezvinhu zvakatemerwa zvinhu.
Kune vatengesi vazhinji vanogona kunge vachidaro asi izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa. Amazon inonyanya kuraira vatengesi vayo kupokana neizvi. Naizvozvo, zvakakosha kuti iwe unyatsoteerera kana iwe uchida kudzivirira iyo yekumiswa kweAmazon kukwidza.
Edza kudzivisa kutengesa
zvigadzirwa zvinogona kuita sekusavimbika kwauri. Kana icho chigadzirwa chauri kutengesa chinoita senge kutevedzera kwechimwe chishandiso kana mashandiro acho, ingoedza kuziva midzi yechigadzirwa icho. Kune akawanda vanhu vanowana maakaundi avo akamiswa nekuda kweIP kutyora marongero. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei vatengesi vazhinji vachiita kuti account yavo isimiswe.
Ehe uchimhanya bhizinesi zvinoreva kuti unogona kunge uri kutengesa zvinopfuura chimwe chigadzirwa. Izvi zvinongoreva kuti kana iwe uchinzwa chero chisinganzwisisike nezve chigadzirwa iwe chauri kutengesa uye unoshuvira kuzviita saka kuwana kubvunzana ndicho chinhu chakanakisa chaungaite.
Dzivisa kubiridzira ongororo dzako.
Ongororo paAmazon ndiyo chiratidzo chakakosha chehunhu hwechigadzirwa chako. Amazon haidi kuti iwe uedze kuzvishandura neimwe nzira. Izvo zvakakosha kuti iwe utore iwo wongororo nenzira inovaka uye utange kuvandudza sevhisi yako nekungoiteerera. Kuongorora kwevatengi ndiyo nzvimbo yekutanga apo munhu anogona kutsvaga kushoropodzwa nekurumbidza. Uye kana ukatadza kuita kudaro saka unogona kunge uri kugamuchira kukwidzwa kweAmazon.
Iva akatendeka netsananguro dzako.
Vazhinji vatengesi vanotsanangura chigadzirwa chavo zvakasiyana nepo icho chaicho chigadzirwa chisiri kumusoro kwetsananguro iyoyo. Kana Amazon ikatambira zvichemo zvakawandisa zvine chekuita ipapo unogona kunge uri kugamuchira an Kumiswa kweAmazon kukwidza.
Kuwana kukwidzwa kweAmazon kukwidza kungave kuri kwakaipisisa kungaitika. Kunyangwe, kana iwe usingakwanise kugadzirisa mamiriro acho saka unogona kutikumbira kuti tikutsigire. Nezve zera, isu tichiri vechidiki asi maererano neruzivo, isu tine vamwe vane ruzivo rwekumiswa kweAmazon nyanzvi dzekumisikidza. Vashandi vedu vane ruzivo rwakadzama muiyo niche uye vane makore echiitiko mumunda. Kunze kwaizvozvo Aplus Global Ecommerce inopa zvimwe mabasa sekudzivirira kwekumiswa, kuongororwa kwehutano hweakaunzi, kuwedzera kwekutengesa, nezvimwewo. Tinovimba izvi zvinogona kunge zviri zvekubatsira kwauri. Zvakare, ndinokutendai nekuiverenga kusvika kumagumo.
Fonera Us On